Ogaden News Agency (ONA) – Itobiya uma qalanto inay nabadgalyada Somaliya Wax-ka-qabato Diyaarna uma aha inay la dagaalanto Al-shabaab
Itobiya uma qalanto inay nabadgalyada Somaliya Wax-ka-qabato Diyaarna uma aha inay la dagaalanto Al-shabaab
Posted by ONA Admin	/ January 3, 2014
Shabakadda Waagacusub ayaa ku bilaabay inay Somaliya u tahay maalin mugdi ah iyadoo kumanaan Somali ah ay Itobiya xasuuq ku hayso. Waxay haystaa Itobiya dhulka Somalida Ogadenya.
Waa nasiibdarro. Siyaasiyiinta Somaliyeed waxay diyaar u yihiin inay u foorarsadaan (Itobiya) oy dhabanada ka dhunkadaan. Ma xasuusan tahay markuu dhintay Kaligii Taliyihii Malas Zenawi? Siyaasiyiinta Somalida waxay ka barooranayeen tacsidiisa.
Ma jirtay wax ixtiraam iyo sharaf ah oy ka muujiyeen dhimashada dadka Somalida ah, iyagoo isla markaa diyaar u ahaa inay u kala orotamaan ka qaybgalka aaskii R/wasaarahii cadawgooda ahaa? Waxay sharaf-dhac u keeneen buu yidhi umadda Somaliyeed, sidaa darteed ayuuna dhiiga qofka Somaliga ah u noqday mid raqiis ah. Ilaa intaan wax ka baranayno oon aqoon ka yeelanayno lagama yaabana inay nabadi ka dhacdo Somaliya.
Askariga Somaliga ah waxaa la siiyaa wax aan macna lahayn meesha askariga Itobiyaanka ah laga siiyo $1500 bishii + gunooyin kale, waxayna xukuumadda Somaliyeed ka filaysaa ciidamada Somaliyeed inay sidaa ku difaacaan dalkooda iyagoo la siiyo $50 bishii iyo $20 oo raashin ahaan loo siiyo. Sidaa darteed ayuu mooraalka ciidanka Somaliyeed u hooseeyaa marwalba, waxaana intaa u dheer iyagoo uu hubkoodu aad u liito oon haysanin rasaas ku filan oy kaga hortagaan Shabaabka doonaya inay dhamaanteen dhibaato noo gaystaan. Itobiya boqolaal ciidankeeda ah ayay soo galisay dalka.
Wuxuu ka soo xigtay qoraaga Somalicurrent warkan ay daabacday Dec 31, 2013 ay kaga warmayaan Itobiya oo soo galisay dalka Somaliya boqolaal ciidan ah iyagoo leh waxaan ka saaraynaa Al-shabaab gobolada Bay iyo Bakool. Waxay yimaadeen magaala madaxda gobolka Bay ee Baydhabo, halkaasoo ay ka dhigteen Saldhig ciidan. Waxay intaa raciyeen in Ku-xigeenka Duqa Gobolka Bay Shiine Macallin Nuurow uu u sheegay saxaafada dalka in ciidanka Itobiya ay taageerayaan qorshaha Xukuumadda ee ah sidii xididada loogu siibi lahaa kooxda Al-shabaab ee ku xidhan Al-Qacida., wax intaa dhaafsana ma sheegin buu yidhin Nuurow.
Ciidamada Itobiya waxay joogeen Somaliya 3exdii sanee u dambaysay iyadoo madaxda Itobiya ay marwalba yidhaadaan muddo yar umbaan joogaynaa Somaliya, taasoo muujinaysa inay ujeeda kale u soo galeen dalka Somaliya.